အို ဘလော့ဂါကြီး သို့မဟုတ် ကိုကြီးကျောက်အား ကန်တော့ခြင်း | ပျူနိုင်ငံ
အို ဘလော့ဂါကြီး သို့မဟုတ် ကိုကြီးကျောက်အား ကန်တော့ခြင်း
ငိုလိုက် ရယ်လိုက် ရပ်တည်နေရတဲ့
လုပ်ခ ဈေးအပေါဆုံး ရတာကို
ပန်းချီကျော် ဂေါ်ဂင်က ရယ်ခြင်းဖွဲ့သတဲ့
ဟိုတယ် ကယ်လီဖိုးနီးယား* သီချင်းစာသားမှာ
တစ်ဖ်နီ* ဆိုတဲ့ ဂျူး’နာမည်လေးပါနေလို့
အဲဒီသီချင်း ဖွင့်ခွင့်မပေးတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီ
မြေကမ္ဘာမှာ ကျိန်စာတွေရှိသလား …
ကိုကြီးကျောက် …. ။ ။
ဟိုတယ် ကယ်လီဖိုးနီးယား *= Hotel California
Posted by ကိုအောင် at 12:57
အန်ကယ်နိုင်အတွက် ရေးထားတဲ့ ကဗျာကို တမလွန်ဘ၀မှ ခံစားနိုင်ပါစေ..
ကိုကြီးကျောက် ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ...........
1 May 2011 at 15:43
1 May 2011 at 16:24
ကိုကြီးကျောက် ကောင်းရာ မွန်ရာကို အစွဲကင်းစွာ ရောက်ပါစေ . . . !_!
1 May 2011 at 19:14
1 May 2011 at 20:05
may kyin said...
2 May 2011 at 04:22
2 May 2011 at 04:24
ကိုအောင်ရေ..ကိုကျောက်ပုံကို အခုတွေ့ရတာ မသေခင် တမြန်နှစ်က ရိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်။သူ့ဘလော့ရဲ့ နောက်ဆုံးပို့စ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေကတော့ မသေခင် တပတ်အလိုလောက်ကရိုက်ပြီးတင်ထားပုံတွေပါ။သိပ်ကွာသွားတယ်နော်။မသေခင်တပတ်အလို မျက်နှာအနေအထားက လူမမာရုပ်တော်တော်ပေါက်ပြီး အရွယ်ကျနေပြီဗျာ။အမေရိကန်ဆရာဝန်တွေ မှန်းခဲ့တဲ့ ၆လပြည့်ချိန် အေပရယ်လ၃၀-၂၀၁၁ နေ့လည်၁နာရီမှာ ဘလော့ဂါ ကိုကျောက် တကယ်သေဆုံးခဲ့ပါပြီ။သူကြိုက်တဲ့ကျောက်နီတောင် ပို့စ်ဟာ ကိုကျောက်ရဲ့နောက်ဆုံးပို့စ်ပါ။ ကျောက်နီနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။
ကိုကြီးကျောက်ကို လူကိုလည်း မသိပါဘူး. ဘလော့ကိုလည်း အမြဲမဖတ်ခဲ့ပါဘူး.. ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ နာရေးသတင်းတွေ့မှ လင်ခ့်ကနေလာကြည့်တာ.. စာတွေဖတ်ကြည့်တာ ဘလော့ကနေ ပြန်မထွက်ချင်လောက်တဲ့အထိ စာရေးကောင်းပါတယ်။ကျနော် နဲ့ မသိပေမယ့် ကျန်ရစ်သူဆွေမျိုးများနှင့်ထပ်တူ မဟုတ်တောင် စာရေးကောင်းသူတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာကို ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းတာ အမှန်ပါ။း-(
ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့အကြောင်း အပြည့်အစုံ ပို့စ်တခု စုံစမ်း ရေးတင်ပေးစေချင်တယ်။အမေရိကကို ဘယ်လိုရောက်လာတာကအစ သိတဲ့သူတွေကို မေးမြန်းပြီး အမှတ်တရ ရေးပေးပါလား။ ဟစ်တိုင်ဆိုဒ်မှာ ပို့ချင်လို့ပါ။
2 May 2011 at 05:36
ဘကျောက် ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေဗျာ။
2 May 2011 at 08:56
ကျနော်နဲ့ ကိုကြီးကျောက်က ဘလော့မှာ တွေ့
ပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးကြတာပါ၊ သူ ဘယ်လို USA
ရောက်တယ်၊ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို ရောက်
တယ် စသဖြင့်တွေ မပြောဖြစ်ကြပါဘူး၊ ဆေးရုံ
တက်ခါစ ဖုန်းနဲ့ နှစ်ကြိမ်၊ ဆေးရုံ ဆင်းခါစက
ဖုန်းနဲ့ တစ်ကြိမ်၊ နောက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ
ဂျီမေးလ်နဲ့တော့ chat ဖြစ်ပါတယ်၊ သူနဲ့ တွေ့
တိုင်း ရယ်စရာတွေသာ အပြောများလို့ သူ့ဘ၀
ကိုယ့်ဘ၀ အကြောင်းတွေ မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး၊
အခု လောလောဆယ် ကျနော်လည်း အလုပ်
နည်းနည်း ရှုပ်နေလို့ အဆင်ပြေရင် သူနဲ့
ပက်သက်ပြီး ပို့စ်တစ်ခုလောက်တော့ ရေးပါ
တည်ငြိမ်ငြိမ်၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရင်ဆိုင်သွားတာ
ဘယ်သူမှမရှောင်လွှဲနိုင်မှန်းသိပေမယ့် လည်း ...
2 May 2011 at 18:45
အဲဒီလောက် မြန်မယ်လို့ ထင်တောင် မထင်မိဘူး.. ဘကျောက် အခြေအနေ ကောင်းနေပြီပဲ မှတ်တာ.. ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ.. ဘကျောက် မြင့်မြတ်တဲ့ ဘုံဘဝကို ရောက်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
3 May 2011 at 07:38
ကိုကြီးကျောက်အတွက် ကိုအောင်နဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။
စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက် လျော့နည်းသွားတဲ့အတွက်လည်း ဘလော့ဂ်လောကကြီးအတွက် စိတ်မကောင်းစရာပါ။
ကိုကြီးကျောက် ကောင်းရာဘုံဘ၀မှာ စိတ်ချမ်းသာစွာ ရှိနိုင်ပါစေ
3 May 2011 at 12:08
စာတစ်မျက်နှာ ရော့ သွားသလိုပါပဲဗျာ..။
ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ အစ်ကိုကြီးနိုင်ခဲ့ တယ်။
ကျွန်တော်တို့သူ့ ကို အတုယူရမယ်။
သေခြင်းတရားက အားလုံးအတွက် ဆိုရင်
အားလုံးဟာလည်း အဲ့ ဒီသေခြင်း အတွက်
အသင့် ဖြစ်နေရတော့ မယ် လို့။
3 May 2011 at 15:33
ကျွန်မလည်း သူ့ကို တိုက်ရိုက်မသိပေမယ့်
ကျွန်မဖတ်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ သူ့ကော်မန့်တွေကို တွေ့ရဖတ်ရလို့ သတိတရ ရှိနေပါတယ်။
အားလုံးနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းမိတယ် အေးချမ်းရာရောက်ပါစေ
4 May 2011 at 15:03
ကျန်ရစ်သူ ဆွေမျိုးသူငယ်ချင်းများ ဘလော့ဂါညီအစ်ကို ညီအစ်မများနှင့်အတူ ဝမ်နည်းကြေကွဲမိပါသည်၊
ရောဂါကိုခံစားရင်း သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကို ကျင့်ကြံနေသူ ကိုကြီးကျောက်တစ်ယောက်
ကောင်းရာမွန်ရာကို ရောက်ရှိပြီး နောက်ဘဝမှာ ဒီသံသရာကလွတ်မြောက်နိုင်သူဖြစ်ပါစေ။
4 May 2011 at 16:14
KO TOE said...
နာရေးသတင်းကို ကြည့်ပြီး ကိုကြီးကျောက်စီ ရောက်ဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ မပြန်ဖြစ်တော့ပဲ စာဧတွဆက်ဖတ်ဖြစ် နေတော့တယ်။ ကိုကြီးကျောက်ကို နှမြောလိုက်တာဗျာ။။။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိုကြီးကျောက် ကောင်းရာသုဂတိမှာ ပျော်ရွှင်နေမှာပါ။။။